समाचार - कसरी उत्तम आउटडोर कपडा छनौट गर्ने?
जाडोमा बाहिर जान, बिभिन्न वातावरणहरू, फरक समयहरू, बिभिन्न सडकहरू, बिभिन्न युगहरू, बाहिरी लुगा विकल्पहरू फरक छन्। त्यसोभए तपाईं कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
१. यी तीन सिद्धान्तहरू मास्टर गर्नुहोस्
भित्रबाट बाहिरी, ती हुन्: पसिना लेयर-तातो लेयर-विन्डप्रूफ लेयर। सामान्यतया भन्नुपर्दा, पसिना-पछाडि तह एक अन्डरशर्ट वा द्रुत-सुकाउने टि-शर्ट हो, तातो लेयर ऊन हो, र विन्डप्रुफ लेयर ज्याकेट वा डाउन ज्याकेट हो। तीन तहहरूको व्यावहारिक टक्करले अधिकांश बाहिरी पर्यटन गतिविधिहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ। हालका वर्षहरूमा, केहि नयाँ सफ्टेल ज्याकेटहरू देखा पर्‍यो। यो पनि राम्रो विकल्प हो, र यसले न्यानोपन र हावाको विशेषता पनि राख्छ। तपाईले अझ बढी लगाउन सक्नुहुन्छ।
२. समय र मार्गका आधारमा तपाईंको लुगा छनौट गर्नुहोस्
थ्री-लेयर कपडाको सिद्धान्त जाडो आउटडोर खेलकुदको सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्त हो। थप रूपमा, वस्त्रहरू वास्तविक स्थिति अनुसार समयमै थपिनुपर्दछ। यदि तपाईं लामो समयको लागि पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, डाउन ज्याकेट ल्याउनुहोस्। फेरीमा कूच गर्दा, पसिना, शारीरिक व्यायाम र शरीरको तापको कारण तपाईलाई धेरै चिसो नहुन सक्छ। यस समयमा, जैकेट नखोल्नुहोस् जबसम्म तपाईं सडकमा आराम गर्नुहुन्न वा तापक्रम कायम राख्न क्याम्पिing गर्नुहुन्न।
Different. विभिन्न उमेरका लागि उपयुक्त कपडा छनौट गर्नुहोस्
बाहिर जाने क्रममा बिभिन्न उमेरका मानिस अलि फरक देखिन्छ। जब वृद्धहरूले आउटडोर खेलहरू गरिरहेका छन्, तिनीहरूले न्यानो राख्नको लागि सकेसम्म धेरै तह लगाउनु पर्छ। बहु-तह कपडाको एकल-तह कपडा भन्दा कडा गर्मी संरक्षण क्षमता छ। थप रूपमा, तिनीहरू व्यायामको समयमा तातो महसुस गर्दा कपडाका धेरै तहहरू पनि उतार्न सक्दछन्। यदि तपाईं बहु तहहरूको लुगा लगाउन चाहनुहुन्न भने, तपाईं ऊन प्लस दुई-टुक्रा स्पोर्ट्स ज्याकेट वा विन्डप्रुफ प्याडेड ज्याकेट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। बाहिरी खेलको समयमा स्वेटर र डाउन ज्याकेट न लगाउन प्रयास गर्नुहोस्, किनकि स्वेटरहरू पानीमा सुक्न सजिलो हुँदैन र भारी हो। डाउन ज्याकेटहरू तातो छन् तर सास हुँदैन।
बच्चाहरूले बाहिरी भित्री तहमा मोटो थर्मल अंडरवियर लगाउँदैन। साधारण कपास अंडरवियर पर्याप्त छ। तातो लेयर कश्मीरी कोट + कश्मीरी भेष्ट वा सानो प्याडेड ज्याकेटको साथ लगाउन सकिन्छ।